Midowga Yurub iyo Garmalka oo dayactiraya wadada Galkacyo-Garowe – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Midowga Yurub iyo Garmalka oo dayactiraya wadada Galkacyo-Garowe
Maanta, Safiirka Midowga Yurub, Michele Cervone d’Urso iyo Safiirka Garmalka Andreas Peschke ayagoo uu la jiro Madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Ali (Gaas) waxay daah-fureen “,mashruuca dayactirk Wadooyinka ee is-wadka leh” ee looga gol leeyahay in lagu dayactiro Jidka “Garowe – Galkacyo”.
Midowga Yurub wuxuu bixinayaa 17.75 milyan yuro Garmalkane 3 milyan kalee yuro iyadoo la siinayo hay’ada Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) si ay u fulisaa mashruuca oo qayb ka ah Heshiiska Cusub (New Deal Compact) kaasoo muhim u ah horumarinta dhaqaalaha Puntland. Run ahaati, wadada Garowe – Galkacyo waxay muhim u tahay dhaqashada iyo dhoofka xoolaha ee Dekeda Bosasso.
Barnaamijku wuxuu maalgelin doonaa dayactirka qaybaha bur-bursan ee jidka iyo dhisidda dhismooyin lagu xakameeyo daadadka hubiyane biyo-xereenada bacdamaa uu jidku ay aad u wax yeeleyeen daadadki 2013ka. Sidoo kale, Mashruucu wuxuu siin doonaa taagyero siyaasadeed Hay’ada wadooyinka Puntland iyo Wasaarada Howlaha Guud ee Puntland iyo sidoo kale barnaamij dayactir sanadla ah caadi ah oo u saamaxaaya nadiifinta biya-shuurada iyo buundooyinka, nadiifinta buudooyin daadadka ka dib sida haaqidda iyo buuxinta boholaha. Waxaa dheer, Ku tabarasho goobta shaqo oo la siinaya si kor loogu qaado xirfada qadaraslaleyda deegaanka.
Laba Safiirba waxay caddeyeen balan-qaadka xoogan ee Midowga Yurub iyo Garmalka ee ku aadan taagyeeridda Heshiiska Soomallieed (Somali Compact). Waxay ku nuux-nuuxsadeen in nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed ay shuruudo hor dhac u yihiin soo kabashada dhaqaale. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed (Gaas) wuxuu soo dhaweeyey tallaabdaan waan uga mahad celiyey Safiirada Peschke iyo Cervone d’Urso asagoo ka wakill ah shacabka Soomaaliyeed. (Dhammaad)
EU and Germany rehabilitate Garowe-Galkacyo corridor
Maareeye: “Mareykanka waxey horumarinayaan warbaahinta Soomaaliya.”